GERMAN ARTICLES, ZVINOTAURWA PAI NDO KUSHANDISWA KWENYU | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Top German Courses » MuGermany, Aripi Articels Inoshandiswa, Ndeipi Kwokushandisa, Ungashandise Sei?
Zvidzidzo zvekare German articles Takataurirana pamusoro pezvakaitika uye mhando yezvigadzirwa zvechiGermany zvatataura, uye tinofanira kutaura kuti panofanira kunge kune nyaya muGermany pamberi pezita rose rejeri.
Kana uchida, tichakupa pfupiso pfupi yezvidzidzo zvepakutanga mumamiriro ekurondedzera kweGerman uye kupa muchidimbu pamusoro pezvinyorwa zveGermany:
1 muchiGerman Articels
2 ChiGiriki Kushandisa
MuchiGermany pane zvepabonde zvemazita emazita uye izvi zvepabonde zvitatu.
MuchiGermany, iyo nhengo ingangodaro zita remurume, chikadzi chemazino kana kuti nharaunda isina kwaakarerekera.
Pamberi pemazita ose ejenesi muchiGerman chinonzi artikel der das die Aya mazwi haana Turkish matanho uye haagoni kushandurirwa muchiTurkey.
Kune mhando mbiri dzemasangano eArticel muGermany.
German der, die and das Nyaya dzinodanwa zvinyorwa.
Uye a ein eine Pano pane mashoko akajeka pamusoro pezvinhu zviviri zviri mu site redu. Pane chido chekudzidza zvose zvipfeko uye zvigadziriswe zvisingagumi.
Chinonzi Artikel, Sei Ungashandisa muchiGermany, Chinoshandisa Chii?
Mukutaura, mazita ose ejenisi anoshandiswa muGermany. Zvisinei, pane dzimwe nguva, unogona kuona kuti mazita anoshandiswa nekutaura kana kuti mazita anokosha anoshandiswa pamwe chete nemashoko acho. Muchikamu chino tichakupa mamwe mashoko pamusoro pezvimwe zvishoma.
MuchiGermany, zvinonzi mazita emhando dzakanyorwa zvakanyorwa pamwechete nemifananidzo yavo, asi kune zvimwe zvisiri izvo kune izvi.
Nenzira yakawanda, chiGerman hachigone kushandiswa nemazita emhando mumatambudziko anotevera:
Iwe haungashandisi mutongo weGermany
Mitsetse yemutauro haigone kushandiswa zvakare
Mumapepanhau eGermany, misoro yemusoro haigone kushandiswa zvakare
Muzvitsvaga zveGermany, mazita echikwata angasazoshandiswa
Musoro mukuru weGermany nepepanhau haugone kushandiswa zvakare
Zvinyorwa mumutauro weGerman chimiro hazviwanike
Zvirevo zveGerman zvingasashandiswa
Zvitauro zveGerman zvinogona kusashandiswa
Takataura kuti mazita anokosha muGermany haazowedzerwa uye kuti mazita chaiwo akanyorwa pasina mazwi. Pane zvimwe zvisiri izvo kune izvi.
Muzviitiko zvinotevera, mazita anokosha anoshandiswa pamwe chete ne:
Mamwe mazita emunyika akanyorwa pamwe chete neshoko. kufa Türkei: Turkey, asi kufa Vereinigte Staaten: US, kufa Niederlande Netherlands, kufa Schweiz: Switzerland nyika dziri nguva dzose dzakanyorwa pamwe chete nenyaya yacho.
Kunyange zvazvo iri zita rega, mazita emugwagwa, gomo, gungwa, gungwa, rwizi uye mazita ekugara akadai anogona kushandiswa ne artikeller.
Kana iwe usingazivi kuti iwe unotevera zvidzidzo zveGerman German lecturesIwe unogona kutevera zvidzidzo zvedu zveGermany zvishoma nezvishoma nenzira ino.
Sangano reAlmanx rinokumbira iwe kubudirira mune zvidzidzo zvako zveGermany almanca
Isuwo tinopa kukwazisa kune vagari vemo vanogara muGermany.
Mutauro weGermany Kutaura, Shanduro mubvunzo wemashoko nemitsara
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german nyaya inotaura, German artikel, Nzira yekushandisa german artikel, chii chiGerman artikel, German artikeller, German articels, Chii chinoshanda muGermany, Chii chinonzi artikel, articules german, Iko kupi zvinhu zvinoshandiswa?
ahmet basic akati:
14 October 2014, 02: 03
makadii akaita iwe kutanga unofanira kuva zvinhu zvakawanda pamusoro uko ndine utano hwako .. kunzwisisa vakadzidza somuenzaniso muzvirevo chikamu, isuwo cinsiyetsizler Das uye kana kutanga kuti vakawanda munyika uye guta mazita ari muenzaniso geçiyor. asi pamusoro achifa türkei vanoti vane pano Das kuvonga kwamuri kuti ndinofanira kutaura kuti ? Ndinokutendai pachine.
17 February 2016, 09: 24
Safi Ahmet Bey.uzun nguva yandisina kupinda muwebsite. Mimwe yemitemo yegiramende inogona kupesana.
KUZVEDZA SEVER. akati:
17 July 2016, 13: 54
Mutsamba iri pamusoro apa, chii r57 uye c99 shell?
21 July 2016, 23: 00
Sawa, mazwi ako akabviswa.
denderedzwa rechiedza akati:
12 July 2018, 13: 36
chiGerman artikeller asi inogona kuudzwa zvakanakisisa.